SNO-CIALS: ငါတို့သည်သင်တို့ထက်ပိုမိုပျော်စရာရှိသည် - သတင်း
Aprèsကအဲလ်ပ်တောင်တန်းကနေထွက်ပြီးနယူးကာဆယ်ကိုသွားမယ်။ အပေါ်နှင်းလျှောစီးကိရိယာ - ၎င်းသည် Northumbria နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအရာရှိများကိုသင်လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
သင်ကြိုတင်သောက်လျှင်သင်၌အခွင့်အရေးမရှိပါ။ သင်၏တက္ကစီကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ပါ။ ငါသည်ဤအချိန် 1am အတိတ်အောင်နိုင်ခဲ့သည်ပြောအံ့သြသွားတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းဒုတိယဘားတွင်အိပ်ယာဝင်ပြီးနောက်စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှု။
အဆိုပါ trebles ကန်နေကြသည်နှင့်စပျစ်ရည်ပုလင်းတ ဦး တည်းအတွက်ဖြိုဖျက်နေကြသည်။ Victoria 22 သည် Project X မှမြင်ကွင်းတစ်ခုသို့တဖြည်းဖြည်းပေါင်းစည်းသွားသည်
ကြီးမားသောယစ်မူးနေသောဆီးနှင်းမိသားစုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေပြီးကော်မတီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံမှုကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေပြီးပရမ်းပတာမဖြစ်မှီကျွန်ုပ်တို့၏အစာအိမ်ကိုတန်းစီရန်ဘူဖေးပေးသည်။ အစားအစာနှင့်စပျစ်ရည်ကိုအလှည့်လှိမ့်ပုံ။ ဟုတ်တယ်ဝိုင်ပိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်သည်စပျစ်ရည်ကိုပိုမိုလိုအပ်နိုင်ဘူးနှင့်စစ်မှန်တဲ့ sno-အရာရှိများဖက်ရှင်အတွက်ကြောင့်လျင်မြန်စွာပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်ဖြစ်ပျက်ငါညအမျိုးအစားများဖြစ်ကြောင်းကိုငါ့ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကိုသို့လှည့်ခဲ့သည်။
Uni-pong ကခရီးကိုဆင်းလိုက်တယ်။ မည်သူမဆိုဝိုင်ပုံး
နှင်းက debauchery တောင်မှစတင်မထားပါဘူး။ ဝိုင်ပွန်စတင်သည်နှင့်ပုလင်းလည်ပတ်လျက်ရှိသည်ဒါပေမယ့်အခုသေစေနိုင်သော Tequila-pong ပေါ်သို့ရွှေ့ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ya ကိုသတ်အံ့သောငှါ Tequila!
Grey Goose ကိုလူအများပါးစပ်ထဲသွန်းလောင်းနေစဉ် Vic 22 ရှိစားပွဲပေါ်ကခုန်နေစဉ်ဝိုင်ပонгကစားခြင်းနှင့်ကခုန်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုထိုညတွင်ကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ Michael J. Trimble ကပြောသည်။ သူမေ့သွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ
သူက The Cut မှာရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကျော်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကိုသူမှတ်မိနေတယ်။ သူများသည်သူကပြောတယ် bouncers အချို့သော Sno-ပျော်စရာရှိသည်ဖို့ကြိုးစားနေ, အမြဲလမ်းအတွက်လာပြီ။
Bras out, markers အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ, SSN snow sex Northumbria မည်သူမဆို? ဒါဟာအဝတ်အချည်းစည်းရရိုးရာဓလေ့ရဲ့များစွာသောသူတို့က The Cut ၌ရှိကြ၏သည်အထိတောင်မှမစောင့်ခဲ့ - Vic 22 ကနေခရီးစဉ်ကိုအလုံအလောက်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ 100 ကျော်ပေါင်းအဝတ်အချည်းစည်း snowdents စံအဖြစ်နယူးကာဆယ်မှတဆင့်ချီတက်။ အဘယ်သူသည်အဝတ်အချည်းစည်းကလူကိုမချစ်သနည်း
MMUFS သည်ထိုက်တန်သောခရီးကိုတက်ခဲ့ရသည်။ Manchester Met ရဲ့ Snowports လည်း SSN အရူးသို့ထုတ်ဖော်ချင်တယ်။ သမ္မတအာဒန်စကန်ကသေချာပေါက်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် - နံရံပေါ်ကနေခုန်ချပြီး 360 ခုန်ပေါက်ပေါက်ကသူ့ကိုပြင်းထန်စွာကိုက်ခဲနေသောခြေကျင်းကျသွားခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွင်သင်၏အရည်အချင်းများကိုအိမ်ပြန်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူက Helena Kennedy ကိုမေးကြည့်ပါ A နဲ့ E ကိုခရီးမသွားဘဲလူမှုရေးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင်သင်၏မြည်းသည် SSN အမှတ်အသားဖြင့်မှတ်သားထားသည့်ရေတွင်ရေချိုးခန်းထဲ၌ရှိနေသည်ကိုသင်ကောင်းကောင်းသိခဲ့သည်။ Debauchery- ဗမာအဘိဓါန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ နောက်ထပ်မမေ့နိုင်သောရူးသွပ်ခြင်းည။